ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံး ဒါကာမြို့၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ သံရုံးသမိုင်းနှင့် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဆက်ဆံရေး
၁။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၅၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့၌ အရှေ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဒါကာ မြို့တွင် မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံးအား စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပါကစ္စတန်လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသံတမန်ဆက်ဆံရေး စတင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံများထဲတွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် ၁၉၇၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် သံတမန်ဆက်ဆံရေး အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သံရုံးအား စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သံရုံးစတင်ဖွင့်လှစ်စဉ်က သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ကောင်စစ်ဝန်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံးသံရုံးအကြီးအကဲအဖြစ် သံအမတ်ကြီး ဦးမောင်မောင်အား ၁၉၇၅ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် စတင်ခန့်အပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ သံရုံးအကြီးအကဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းသည် ၁၂ ယောက်မြောက်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သော သံအမတ်ကြီးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) သံအမတ်ကြီး ဦးမောင်မောင် ၃၀.၀၅.၁၉၇၅ မှ ၁၈.၁၂.၁၉၇၆
(ခ) သံအမတ်ကြီး ဦးသိန်းဝင်း ၁၂.၁၁.၁၉၇၇ မှ ၀၁.၀၇.၁၉၈၂
(ဂ) သံအမတ်ကြီး ဦးသိန်းဟန် ၀၁.၀၉.၁၉၈၂ မှ ၀၆.၀၁.၁၉၈၆
(ဃ) သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးမြင့် ၀၅.၀၄.၁၉၈၆ မှ ၂၄.၀၆.၁၉၉၃
(င) သံအမတ်ကြီး ဦးလှမြင့်ဦး ၁၇.၀၈.၁၉၉၃ မှ ၂၂.၀၂.၁၉၉၆
(စ) သံအမတ်ကြီး ဦးတင့်လွင့် ၃၀.၀၃.၁၉၉၆ မှ ၀၇.၀၈.၁၉၉၉
(ဆ) သံအမတ်ကြီး ဦးအုန်းသွင် ၁၉.၀၁.၂၀၀၀ မှ ၀၇.၁၂.၂၀၀၃
(ဇ) သံအမတ်ကြီး ဦးသိန်းမြင့် ၁၀.၁၂.၂၀၀၃ မှ ၂၁.၀၃.၂၀၀၇
(ဈ) သံအမတ်ကြီး ဦးဥာဏ်လင်း ၃၀.၀၃.၂၀၀၇ မှ ၂၅.၀၆.၂၀၀၈
(ည) သံအမတ်ကြီး ဦးဖေသန်းဦး ၂၆.၀၆.၂၀၀၈ မှ ၂၆.၁၁.၂၀၁၀
(ဋ) သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းလွင် ၁၅.၀၁.၂၀၁၁ မှ ၂၆.၁၁.၂၀၁၂
(ဌ) သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း ၂၅.၀၆.၂၀၁၂ မှ ယခုထိ
၃။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံရုံးအား ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးသံရုံးအကြီးအကဲအဖြစ် သံအမတ်ကြီး Mr.Khwaja Mohammed Kaisar မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သံအမတ်ကြီး H.E Major General Anup Kumar Chakma, ndc, psc သည် ၁၅ ယောက်မြောက် သံအမတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။
Email : mynembdk@dhaka.net
FDI laws and regulations
To donate evenalittle, donors are kindly requested to deposit into one of those accounts. Thank you.
Daily News Brief on Rakhine State